Adore Cricket Can red-green colour-blind people play cricket?
1 Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi?
Kushicilelwe 28th May 2013 by Jon Scaife & wafaka ngaphansi Uncategorised.
Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, kungazelelwe umcabango lafika kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch oluhlaza, can red-green col­our-blind people play crick­et successfully?
Angikwazi ukucabanga ukuthi kungani abaphosayo bezokhishwa kabi kakhulu, kepha ukushaya nokufaka enkundleni kungaba nzima kakhulu. Ngesikrini sokubona noma yibuphi ubunzima kufanele bancishiswe, futhi ukubanjwa okuningi enkundleni kunesibhakabhaka njengesizinda sangemuva, kepha kusazoba nezikhathi lapho ibhola kufanele kube nzima kakhulu ukulikhetha. Ngakho-ke, baningi abadlali abasezingeni eliphakeme kakhulu abangaboni? Kubonakala sengathi abase-Australia banakho ungishaye kuso, futhi sengivele ngenze okuxhunyelelwe kanzima ukunikeza impendulo kulo mbuzo. Isiphetho: emazingeni amaningi abantu abangaboni imibala baboniswa ngokuhambisana nenombolo yabo kubantu (azungeze 10%), kepha emazingeni aphakeme kakhulu akukho bantu abangaboni kahle nhlobo (UBill Ponsford angahle abe ngumthetho. Le nganekwane yase-Aussie yadlala 29 test okufanayo ngesilinganiso se- 48). Kubukeka sengathi emazingeni aphakeme kakhulu ukungaboni umbala kuyisithiyo esikhulu. Kuwo wonke amazinga, Abadlali abanobumpumputhe bebala bakuthola kunzima ukubona ibhola linqamula otshanini futhi bathambekele ekugwemeni izikhundla eziphakathi nendawo nokujula - okaputeni bayabona! Olunye ucwaningo lukhombisile ukuthi abashayayo abangaboni imibala abathinteki kakhulu, isibonelo ukudlala ngokulingene nebhola elimhlophe akuhlukile kunesilinganiso sabo nebhola elibomvu.
Ngakho, kubonakala sengathi ngenkathi singeke sikwazi ukuthola abadlali abaningi bokuhlola abangaboni imibala, uma ungaboni kahle futhi ufuna ukwehlela ekilabhini lendawo ngempelasonto, hamba babhajwe! Ungatshala futhi imali ngababili Oxy-Iso izibuko, okusobala ukuthi kuthuthukisa ubomvu nemifino!
I kumelwe futhi athi, kunezimo ezahlukahlukene ezawela ngaphansi kwegama lengubo "red-green color-blind", okuyi-protanopia, deuteranopia, pranomaly, futhi deuteranomaly. Uma ucabanga ukuthi ungaba nesinye salezi zimo kodwa ungatholakali, ngicela ukhulume nodokotela wakho (ngaphambi noma ngemuva komdlalo) - siyiwebhusayithi yekhilikithi hhayi eyezokwelapha!
Ucabanga ukuthi senze uphuthelwe into? Sazise ngokukhuluma ngezansi. Uma ungathanda ukuba ubhalise sicela usebenzise ubhalisele isixhumanisi on the imenyu at ilungelo phezulu. Ungase futhi wabelane le nabangani bakho ngokusebenzisa links social ngezansi. cheers.
Tags: Bill Ponsford, umbala blind, Oxy-Iso, red ball, ibhola white
Awekho amaposi Ezihlobene Nokho!
11th Februwari 2021
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (859 ukubukwa)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (91 ukubukwa)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (48 ukubukwa)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
I-New Zealand 0- England: Good for Test Cricket (32 ukubukwa)It's not often you'll hear me cheer a series where all of the test matches finished in draws, and it's even less often that I celebrate England failing to win a series. However that is ...
Trent Ibhuloho - Ukuvivinywa phansi Umhlahlandlela (42.7k views)In the yokuqala ochungechungeni oluhlelelwe "khaphi kuze ngezizathu" thina isici Trent Ibhuloho imininingwane kusakhiwo bomhlaba futhi izindawo ezingcono ahlale Ukuze uqale nge, nansi isithombe ...
I Bowler sika Holding ... innuendo kusaqhubeka (18.7k views)Cishe zonke fan cricket ayobe ewazwile lesisho edumile, kukhonjwe Brian Johnston, "Holding The Bowler sika, the Batsman sika Willey". Kungakhathaliseki noma cha lokhu ngempela kwakuthiwa bukhoma emoyeni engasekho okubalulekile omkhulu ...
Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi? (8k views)Noma kukhathaza nje ukukhononda ngazibonela ngokwami ​​mayelana ekupheleni play (ngenxa yokuthi bese kumnyama) izolo ebusuku, Kwafika umcabango engqondweni kimi - nge ibhola elibomvu futhi pitch green, kungaba red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi ...
Bonke entsha England, ngaphandle KP (5.5k views)In the cricket izindaba enkulu usuku England isimemezele Kevin Pieterson ngeke kusaba amacebo abo, ngempumelelo ukuxoshwa batsman zabo eliphambili. Ekugcineni Lokhu sivukile angibhalele sihloko yami yokuqala ...
David Cook on Can red-green abantu ibala lesikhumba ukudlala ikhilikithi?: “The pink ball appears grey/blue in red/green deficient vision, depending on its severity. I did a simulation with colour blindness…”